Hindisaha dowladda, PLFR waxay hadda bixineysaa si deg deg ah loo sii daayo € 30 milyan oo dheeri ah si loogu maalgeliyo habka degdegga ah ee loogu talagalay in lagu ilaaliyo shaqaalaynta ururada.
In ka badan kuwa kale, kuwa ugu yar ayaa runtii wiiqay cawaaqib xumada ka dhalatey cudurka 'Covid-19'. Farsamadan cusub ee taakuleynta ah ayaa ugu horreyn bartilmaameedsan doonta ururada yar yar ee aan awoodin inay caawimaad ka helaan Sanduuqa Wadajirka ah ee Sharciga Wadajirka ah qaabkooda soo jireenka ah, iyo sidoo kale ururada ku howlan arrimaha dhaqaalaha.
Ujeeddada ugu weyn ee qalabkan deg-degga ah waa in la helo shabakad badbaado leh, iyadoo laga fogaanayo saameynta miisaanka culus. Qaar ka mid ah 5.000 oo urur waa inay ka faa'iideystaan ​​kaalmadan gobolka.
Laga soo bilaabo qaybtii ugu horreysay ee xiritaanka gugii la soo dhaafay, dib ugu noqoshada Sanduuqa Wadajirka ah ee Sharciga Wadajirka ah ee ay maalgeliso Gobolka ayaa loo suurtageliyay jilayaasha wadaagga ah ee shaqaaleysiiya shaqaalaha. Laakiin weydiisashada qalabkan ururadu waxay cadeeyeen inay xadidan tahay.
Xaqiiqdii, laga bilaabo Oktoobar 11, 2020, kaliya 15.100 jaaliyadood ayaa ka faa'iideystay Sanduuqa Midnimada (wadar ahaan 67,4 milyan oo euro), oo ka mid ah 160.000 ururro shaqo-bixiye, oo ay ku jiraan 120.000 oo ururro ah oo ka yar toban shaqaale ah ...
30 milyan oo yuuro si loogu taageero shaqo wadaag Diisambar 29, 2020Tranquillus
READ Laga soo bilaabo hal-abuurka ilaa hal-abuurka
horeDib-u-tababarid ama dallacsiin iyada oo loo marayo barnaamijyo daraasad shaqo ayaa lagu daadiyaa laamaha
socdaMiyaad ka fikirtay inaad tababarto shaqaalahaaga inta lagu jiro mudada aan firfircooneyn?